Ndị ahịa na ọbá akwụkwọ n'efu maka WhatsApp mepere emepe karịa Site na Linux
Ndị ahịa na ụlọ akwụkwọ adịghị akwụ ụgwọ maka WhatsApp mepere emepe
WhatsApp Ọ bụ ihe kacha eji ozi ngwa ngwa na ụwa, anyị niile maara ya maka ebumnuche 2 dị mfe ma ọ bụ na anyị ejiri ya ma ọ bụ jụọ anyị ma anyị jiri ya. Obi abụọ adịghị ya, ikpo okwu a emeela ka nkwukọrịta oge bụrụ nke zuru ụwa ọnụ, ọnụọgụ nke ọganihu ndị emere n'oge ndị a, kwesịrị ime ka ndị na-agbachitere Free Software lee ngwa a wee mụta site na azụmaahịa ya, njikwa sọftụwia yana ọkachasị mmeghari ohuru ya.
Mara mkpa na mmetụta ọ nwere WhatsApp Maka ọtụtụ ndị mmadụ, ọ dị mkpa ka anyị mara na site na ụwa nke mmemme Sọftụwia Free, api, ihu na ọbụna algorithms emechi emegola nke mere ka anyị nweta ọtụtụ ngwa a na agbanyeghị na anyị ga-ahụ ya n'anya inwere onwe, ọ bụghị, mana n'agbanyeghị nke ahụ, obodo ndị ahụ siri ọnwụ na ha ga-arụ ọrụ ụfọdụ anyị ga-enyocha n'okpuru.
Kemgbe oge gara aga WhatsApp Enwere ike iji ya site na ekwentị mkpanaaka na kọmpụta, jiri ọrụ WhatsApp Web a ma ama ugbu a, nke na-enye anyị ohere i usomi koodu QR site na ekwentị mkpanaka anyị na akpaghị aka interface ga-emepe nke na-enye anyị ohere ịhụ mkparịta ụka anyị, zipu ma nata ozi na ọbụna itinye faịlụ multimedia, otu n'ime njedebe nke WhatsApp Web bụ na nkwukọrịta sitere na mkpanaka ahụ, yabụ a ga-agbanye ya ma jikọọ na data maka ya ka ọ rụọ ọrụ. Agbanyeghị na ndị hụrụ Linux n'anya nwere ike iji ọrụ WhatsApp Weebụ site na ọtụtụ ihe nchọgharị, enwere ọtụtụ ndị ahịa na-enye anyị ohere iji whattsapp site na sistemụ arụmọrụ anyị, n'etiti ndị ahịa kachasị ama maka WhatsApp site na Linux anyị nwere:
1.1 Ubuntu, Debian (ngwugwu deb):
1.2 Fedora, CentOS, Red Hat (ngwugwu RPM):
2.1 Njikọ Linux, Manjaro (AUR):
2.2 Nkata Api
Nke a interface maka Linux bụ nke m na-eji kwa ụbọchị, ọ na-azọpụta m oge dị ukwuu, ọ nwere arụmọrụ niile nke WhatsApp Web, na mgbakwunye na inwe ike ịmalite mgbe usoro ahụ malitere, ọ nwere nyocha anwansị, ọ nwere ohere na a na-ahụ ngwa ahụ mgbe niile yana Site n'ịgbanwe ụdị eserese, anyị nwere ike itinye akara ngosi na mmanya wee mepee njikọ ahụ ozugbo, mana isi uru bụ na ọ naghị amanye anyị ịmepe ihe nchọgharị ahụ n'ihi na ọ na-eji Web App echiche.
Iji na-enwe Kedu site na Linux anyị nwere ike iji usoro ndị a dị ka ọkacha mmasị gị distro.
Ubuntu, Debian (ngwugwu deb):
Pịa ugboro abụọ ma wụnye, ma ọ bụ anyị nwere ike ịgba ọsọ iwu na-esote na ọnụ dpkg -i whatsie-x.x.x-linux-arch.deb
Anyị na-agba ọsọ na ngwa ahụ wee malite ịnụ ụtọ, ngwa ahụ agaghị emelite na-akpaghị aka mana anyị nwere ike ịlele ma enwere mmelite ma ọ bụ na enweghị.
Anyị nwekwara ike iji ezi uche n'ụzọ dị otu a:
Fedora, CentOS, Red Hat (ngwugwu RPM):
Pịa ugboro abụọ ma wụnye, ma ọ bụ anyị nwere ike ịgba ọsọ iwu na-esote na ọnụ rpm -ivh whatsie-x.x.x-linux-arch.rpm
I nwekwara ike iji yum:
Njikọ Linux, Manjaro (AUR):
Naanị anyị na-agba ọsọ na-esote iwu na ọnụ yaourt -S whatsie
Ọtụtụ n'ime anyị nwere ike ịma Franz, ngwa izipu ozi n'efu nke na-enye anyị ohere iwekota usoro nkata anyị niile n'otu ngwa, o doro anya na ọ bụ nnukwu ọrụ, mepee Franz wee bido hụ nkata ndị enyi anyị, ndị ahịa na ndị enyi anyị n'otu ikpo okwu doro anya. na-azọpụta anyị ọtụtụ oge. Franz na-enye anyị ohere iwebata ugbu a WhatsApp, slack, WeChat, Hipchat, Facebook ozi, telegram, Google Hangouts, OtuMihe, Pee pepe n'etiti ndị ọzọ.
Iji wụnye Franz na nkesa kachasị amasị anyị anyị ga-ebudata faịlụ .tar.gz kwekọrọ, chịkọta ma nwee ọ enjoyụ
Franz maka bits 32
Franz maka bits 64
Naanị anyị na-agba ọsọ na-esote iwu na ọnụ yaourt -S franz --noconfirm
Anyị na-agba ọsọ ahụ wee malite ịnụ ụtọ ya.
Maka ndị mmepe anyị nwekwara ihe akwadobere, nwa oge ka ahapụgoro nnukwu ọba akwụkwọ iji soro WhatsApp nwee mmekọrịta, otu na Php na nke ọzọ na Python.
Ọ bụ nnukwu ọbá akwụkwọ dị ike nke ejiri Php mee nke ahụ nke na-enye anyị ohere ịkọrọ ndị ọrụ WhatsApp, ọ nwere ọtụtụ ụzọ na-enye anyị ohere ijikọ ma nweta WhatsApp, iji ihe omume, izipu na ịnata ozi, ojiji nke emoji, tọgharịa okwuntughe, ngosi profaịlụ, oge nlele ikpeazụ, ndenye aha, mepụta ma jikwaa otu dị iche iche, nọmba na-akwaga, nchekwa data nchekwa, njedebe njedebe na njedebe nzuzo, n'etiti ndị ọzọ. O nwere obosara akwụkwọ ọ mepụtara site na ịgbaso ụkpụrụ mba ụwa.
con Nkata Api ị nwere ike ịme ọtụtụ ngwa ma ị nwere ike iduzi ya na ọrụ dị iche iche, ọtụtụ nyiwe ugbua jiri ya mee ihe na ngwa ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ na ngwa ahịa. Iji na-enwe Chat Api ị nwere ike ibudata ya na ụlọ ọrụ gọọmentị. A pụrụ iji ụlọ akwụkwọ a mara nke ọma na vidiyo na-esonụ
Ndị hụrụ Python nwere ike ịnụ ụtọ ọmarịcha ọbá akwụkwọ a dabere na ya Nkata Api na nke ahụ na-agbanwe ngwa ngwa. Yowsup bụ ọba akwụkwọ Python nke na-enye gị ohere ịmepụta ngwa ndị na-eji ọrụ WhatsApp. Ejiri Yowsup mepụta onye ahịa WhatsApp na-enweghị akwụkwọ maka Nokia N9 site na ọrụ Wazapp nke nwere ihe karịrị ndị ọrụ 200000, yana onye ahịa ọzọ na-enweghị ọkwa zuru oke maka Blackberry 10.
Yowsup nwụnye dị mfe.
Na-achọ Python 2.6+, ma ọ bụ Python 3.0+
Ihe ngwugwu Python achọrọ bụ: python-dateutil yowsup-cli : argparse
Wụnye iji setup.py iji mejuo ihe ndi ozo.
Anyị nwekwara ike mfe wụnye dị ka ndị a
Mgbe ahụ, anyị na-emechi ebe nchekwa Yowsup
Ebudatara, anyị na-ewepụ ya unzip master.zip na anyị nweta src / directory, n'ime a ga-enwe faịlụ a na-akpọ "config.example" anyị nwere ike i copyomi ya na faịlụ ọhụrụ iji hazie ya na data anyị dị ka ndị a # cp config.example whatsapp_config.txt. El nombre del archivo solo es una sugerencia.
N'ime otu ndekọ ahụ ọ dị mkpa ịnye ikikere ogbugbu na faịlụ "yowsup-cli" dị ka ndị a
Ọ dị mkpa iburu n'uche na enwere ụzọ ọzọ n'efu na WhatsApp nke dị ezigbo mma yana na n'ọnọdụ ụfọdụ, dị ka Telegram, ekwenyere m na-enweghị atụ ụjọ na ịbụ onye ọjọọ na ọ dị elu. N'agbanyeghị nke a, enwere m olileanya na site ugbu a gaa n'ihu, ị nwere ike ịgbatị ngwa ka mma nke ngwa a nke nwere ike ọ bụghị ọkacha mmasị mmadụ niile, mana na ụfọdụ ọ dị mkpa iji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ndị ahịa na ụlọ akwụkwọ adịghị akwụ ụgwọ maka WhatsApp mepere emepe
Ihe na-adọrọ mmasị. Ekwenyere m na anyị ga-amụta site na akụkọ ịga nke ọma nke sọftụwia nwere nke ọma iji tinye ihe mmụta ọ na-adọta n'ịkwalite sọftụwia n'efu.
Onwe enwere ụfọdụ ngwa m amaghi na aga m anwa ya ozigbo.
Zaghachi Ricardo Otxoa
N'achọghị ka ekewapụta gị dịka Troll ọ bụrụ na ịchọrọ WhatsApp n'efu maka Linux USAD «Telegram»
Ihe ndị a niile bụ akwa dị ọkụ iji jiri WhatsApp Web ọ bụghị site na ihe nchọgharị ahụ kama site na ngwa, mana ọ nwere otu njedebe nke nke a, nke bụ njikọ ọbara na ekwentị ee ma ọ bụ ee, yabụ ọ bụrụ na akara adịghị ike ee njikọ ahụ na ekwentị furu efu, webụ bụ USELESS
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iwepụ adịghị ike niile dị nzuzu, jiri ngwa nke bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, Ọ B PRR PR N’OKP ANDR AND OGE MA nwee uche, ya na ndị sava dekọtara ọnụ, cha cha nzuzo, ngwa ọdịnala maka imirikiti sistemụ, ma ekwenti ma ọ bụ PC (yana ụfọdụ smartwhatch), Telegram, bụ azịza ị chọrọ
Abụ m onye ọrụ Telegram ma ana m agbachitere ngwa a, mana ịkwesighi ịgha ndị mmadụ ụgha. Telegram APP bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, anyị nwere koodu isi. Mana sava ahụ bụ nke aka, anyị enweghị ike ịnweta koodu ahụ yabụ na anyị amaghị ihe ọ bụla gbasara ihe na-eme ebe ahụ. Yabụ na nke a Telegram bụ otu WhatsApp ọzọ.
Eziokwu, ma ọ bụrụ na ịmara otu ngwa ahụ si arụ ọrụ ma ọ bụrụ na arụmọrụ ya adịghị ka ọ na-ekwu, mgbe ahụ ị ga-ama. Ọ bụrụ na ọ nweghị izo ya ezo a ga-amata ya, ọ bụrụ na mkparịta ụka nzuzo adịghị ebibi onwe ya, a ga-ama ya, ọ bụrụ na ebibighị akaụntụ ahụ mgbe akọwapụtara oge ọ ga-amata
Ihe dị iche bụ ihe dị njọ, mana abysmal, ha enweghị sava n'efu mana akụrụngwa nwere. Dị ka m maara, ọ dịghị
M ghara ụgha, m na-ezo aka na ngwa.
Ọzọkwa ọ bụrụ na echetaghị m nke ọma, na weebụsaịtị ha ha kọwara ihe kpatara na ndị sava ahụ anaghị enwere onwe ha, ọ nwere ike ime ka ị kwenye ma ọ bụ, mana ha abụghị nkịta ọhịa, onye ma ihe Facebook na-eme na whatsapp?
Chee ebe ahụ, ị ​​maara ihe ọ bụla gbasara azụ? A na-ahụ ihe niile ị na-ekwu n’ihu, mana n’azu ị maara etu anwansi si arụ ọrụ? tebụl na-echekwa ozi ... cheta na msg ahụ na-eru ihe nkesa ahụ, ọrụ doro anya ga-ejikọ ndị ahịa, ọ bụghị ndị ahịa-sava, mana nke ahụ bụ nsogbu ọzọ.
Jiri nkwanye ugwu dị iche iche tinye ozi a n’akụkụ eziokwu bụ ọkara Annoying XD «Nata ozi niile sitere na Fromlinux.net!
Naanị ịpị "OK" ị ga-enweta amamọkwa nke isiokwu ọhụrụ niile anyị na-ebipụta. "
Ọ bụrụ na ịmara na site na iji ndị ahịa "ndị ọzọ" ị na-emebi ikike WhatsApp?
Kedu ihe iji iji sọftụwia enyere ikikere n'efu, ọ bụrụ na ịmee ya na ịda ikike nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ?
Ndewo, ndo maka offtopic. Ọ ga-amasị m ịtụ aro otu isiokwu esi wụnye Sopcast, echere m na ọ bụ mmemme dị oke mkpa maka ọtụtụ mmadụ, na enweghị ozi n'asụsụ Spanish maka otu esi esi wụnye ya.
Daalụ nke ukwuu!.
Ndewo Whatsie enweghị ọtụtụ ihe karịa ihe whatsapp web na-enye m site na ihe nchọgharị ahụ, ma e wezụga maka mmalite ka mma, m ka ga-emeghe kọmputa ahụ iji nwee ike ịnweta mgbe oge na-abaghị uru. Ya mere, m ga-achọ iwepụ ya. Gịnị ga-abụ iwu iwepụ site na njikwa ma ọ bụrụ na ị wụnye ya na usoro ndị a ị tinyere: «gpg –keyserver pool.sks-keyservers.net –recv-keys 1537994D
gpg –export -armor 1537994D | sudo apt-key tinye -
nkuzi mgbamejije «deb https://dl.bintray.com/aluxian/deb anụ ụlọ »| sudo tee -a /etc/apt/sources.list
sudo apt-nweta wụnye whatsie »
PS: Amaara m gbasara mkpocha ma ọ bụ wepu iwu, mana m chọrọ iwepụ ndị ọzọ.
Edemede dị mma nke mbu.
Ọ bụ ihe ihere na ndị mmadụ amaghị maka ike Telegram, maka ebumnuche omume na maka ihe ngwa ahụ na-enye. Ọ na-ewe afọ ole na ole site na WhatsApp, ihe nwute bụ na WhatsApp ewegharala ahịa ahụ.
Olileanya otu ụbọchị ọha mmadụ ga-atụgharị uche ma tụlee iji Telegram dịka ngwa izipu ozi ndabere kama WhatsApp.
Zaghachi Kevin Rodríguez
M na-enyocha Apis maka nkata ... ebe m nwere ike ibudata «Chat Api», anaghịzi m ahụ ya dị na https://github.com/
Mara: ọ baghị uru na ọ dị ugbu a
Mụta itinye akara na mkpụrụedemede Star Wars VII
Zute Vivaldi, ihe nchọgharị dị mma na mbipụta mbụ ya